LG wuxuu noqon doonaa soosaaraha ugu weyn ee shaashadaha laabma ee Apple, Microsoft iyo Google | Wararka IPhone
LG wuxuu noqon doonaa soosaaraha ugu weyn ee shaashadaha laabma ee Apple, Microsoft iyo Google
Samsung waxay ka mid tahay shirkadaha ka shaqeynayey shaashadda isku laabashada waqtiga ugu dheer. Sanadihii la soo dhaafay, wuxuu na tusayaa sida uu u doonayo taleefanka casriga ee mustaqbalka inuu noqdo, iyo taas ayaa diiwaangeliyey tiro badan oo shatiyada la xiriira shaashadaha isku laaban. Sida laga soo xigtay ET News, shirkadda LG ayaa abuurtay sidoo kale waxay baareysaa arrintaan waxay soo saartay nooc ka mid ah guddiga OLED oo isku laaban, guddi sida muuqata soo jiitay indhaha Apple, Microsoft iyo Google, kuwaas oo fulin kara iyo aaladooda mustaqbalka. , ha ahaato mid guurguura ama la qaadan karo.
Dhamaan wararka xanta ah waxay soo jeedinayaan in Apple ay bilaabi karto adeegsiga alwaaxda OLED iyada oo la bilaabayo iPhone-ka soo socda, ha ahaato 7s, 8 ama 10 (sanad guuradii tobnaad, Apple waxaa laga yaabaa inuu na siiyo layaab ku saabsan magac-bixinta iPhone). Samsung iyo LG waxay u dagaallamayeen sidii ay ula wareegi lahaayeen soosaarka shaashadan laakiin sida muuqata shirkadda LG waa tan bisadda gaysay biyaha oo mas'uul ka noqon doonta soo saarideeda.
Waqtigan xaadirka ah nooca LG uu tusay isbahaysigan, waxay leedahay qiime aad u sarreeya oo soo saarkeedaLaakiin markii tikniyoolajiyaddu sii socoto, qiimaha wax soo saarku wuu yaraan doonaa waana lagu hirgelin karaa qalabka badankood. Waxa ugu badan ee igu dhaca aniga oo ah nooca loo malaynayo ayaa ah in aanaan hayn wax diiwaan ah oo ah LG oo diiwaangashan qalab kasta oo u oggolaanaya shaashadda inuu laabmo, sida Samsung iyo Apple ay sameeyeen bilihii dhowaa.
Ma naqaano in ururkan shirkadaha ay sabab u yihiin waxay rabaan inay la istaagaan Samsung awooda leh arimahan, ama inkasta oo Samsung aysan doonayn inay soo saarto dhinacyada saddexaad si ay u yeeshaan, ugu yaraan sannadaha ugu horreeya, lahaanshaha qalabka leh shaashado isku laaban, wax hubaal ka dhigaya inay soo jiitaan tiro badan oo macaamiil cusub ah oo xiiseynaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » LG wuxuu noqon doonaa soosaaraha ugu weyn ee shaashadaha laabma ee Apple, Microsoft iyo Google
9 Cayaar iyo Codsiyo Bilaash ah oo loogu talagalay raaxeysiga usbuuca
10 barnaamijyo iyo ciyaaro bilaash ah iyo waqti xadidan